Times24 Nepal » शिक्षा
फर्सीको मुन्टामा हुन्छ यस्ता अनेकौ गुण : जानी राखौ।
१५ बैशाख २०७६, आईतवार १२:२९
टाईम्स २४ नेपाल काठमाडौ : तपाईँ साग कतिको खानु हुन्छ ? तपाईँलाई कुन साग सबैभन्दा बढी मन पर्छ ? हुन त बजारमा वा तपाईँको करेसाबारीमा विभिन्न प्रजातीका सागहरु सजिलै पाउन सकिन्छ । तर, तपाईँले प्रयोग गर्ने सागहरुको प्रजातीमध्ये एक हो फर्सीको मुन्टा वा भनौ फर्सीको पातको साग । उसो त फर्सी पनि खानु हाम्रो स्वास्थ्यको.....
प्रियंका संसारका ५० शक्तिशाली महिलाको सूचीमा !
६ चैत्र २०७५, बुधबार ०४:१४
एजेन्सी, चैत ६ बलिउड नायिका तथा पूर्वमिस वर्ल्डसमेत रहेकी प्रियंका चोपडा संसारका ५० शक्तिशाली महिलाको सूचीमा परेकी छन् । उनी मनोरञ्जन जगतका ५० शक्तिशाली महिलाको सूचीमा पर्न सफल भएकी हुन् । ‘युएसए टुडे’ले जारी गरेको संसारका शक्तिशाली महिलाको सूचीमा प्रियंका पर्दा ओपरा विन्फ्रे तथा मेरिल स्ट्रिपका.....